Degmada Baargaal oo laga soo sheegayo Dawo iyo Biyo La’aan - BAARGAAL.NET
Arimaha Bulshada Baargaal Puntland 2009
Degmada Baargaal oo laga soo sheegayo Dawo iyo Biyo La’aan
✔ Admin on May 20, 2009 0 Comment
Axmed Salaad oo ka tirsan Odayaasha ku dhaqan degmada Baargaal ayaa Barnaamijka Xog Ogaal ee ka baxa Horseed Media u sheegay in aysan dadka degaanka Baargaal aysan haysan wax dawo iyo daryeel ah midna.
Wax uu ku sheegay in Maamulka Dowlada gaar ahaan kuwa Gobolka Bari ay dhowr jeer oo hore Codsiyo ay u direen aysan ka helin wax Jawaab ah isaga oo sheegay in xaalada dadka Degaankaas ay tahay mid aad u liidata.Wax kale oo uu sheegay in Maamulka iyo Hay’adaha iyo Cid walba oo ku shaqo leh arintaan ay ka codsanayaan in lala soo gaaro Gar gaar deg deg ah isaga oo aad uga deyriyey Xaalka dadka degaanka.
Dawo La’aanta wax weeye dhibta ugu weyn ay haysta dadka degaanka sida uu sheegay Axmed Salaad oo ka tirsan Odayaasha Degaanka Baargaal.
Hadalka odayaasha ayaa yimid Xilli DGPL ay sheegtay in badan ay wax ka qabtay Arimaha Abaaraha kuwaas oo u muuqda in Meelaha ka baxsan Wadada Dheer ee laamiga ay ka jirto Xaalado aad u xun.
Degaano kale oo ka tirsan Goboladda Sanaag iyo Karkaar ayaa sidoo kale waxaa ka soo baxay Qeylo dhan abaar taas oo u muuqta mid soo noq noqtay oo aan lagu guuleysan in wax laga qabto.
Ilaahay waxaan ugu baryeynaa in uu roob raxmaad khayr qaba oo deg-deg inoo keeno weliba oo dhulka oo dhan wada gaadha oo barako leh Ilaahay ha ina siiyo". AAMiin Aaaamiin
Xigasho Waraysigan : HR Media
Arimaha Bulshada|Baargaal|Puntland 2009|
SAWIRO: Hay'ada ARC oo tartan Kubada Cagta ah ku qabatay Degmada Baargaal ee Gobolka Gardafuu
Hay'adda ARC International Ayaa Soo Gabagabaysay Tartan Kubadda Cagta Ah Oo Maalmihii Lasoo Dhaafay ka socday Degmada Baargaal ee Gobo...
PUNTLAND: DHANKEE U DHACAYAAN DABAYLAHA DOORASHADU? (MAQAAL)
Kal walba amin taan oo kale, odayaasha dhaqanka ee beelaha reer Puntland waxay soo saaraan lixdan iyo lix xildhibaan. Kuwaas oo la waydi...
Nimcaan Hilaac Heeso Qoraal ah oo xul ah
Fanaanka kasoo iftiimay Geeska Afrika iyo soomaaliya NIMCAAN HILAAC ayaa durbadiiba soo jiitay taageerayaal badan oo ku kala nool dunida ...